I-nylon elevator pulley isetshenziswe kumadivayisi we-elevator amashumishumi eminyaka ngokufaneleka kwayo kokuzigcoba, isisindo esilula nokuvikelwa kwentambo yocingo. Ngaphezulu kwama-80% wamapulisi we-elevator asebenzisa impahla ye-nylon futhi angathola impilo ethe xaxa yokusebenza kwayo yonke imishini. Futhi njengokulawula okuqinile kukahulumeni embonini yensimbi ngokungcolisa kwayo imvelo, ama-pulleys enayiloni azosetshenziswa kakhulu kumadivayisi we-elevator.
Inayiloni igiya, njengokuzizuzisa kwayo kwesisindo esilula, kulula ukuyibamba, ukumelana okuhle kwemihuzuko, impilo yokusetshenziswa ende. Ukuvikelwa kwezingxenye ze-stell, kusetshenziswe embonini yobunjiniyela cishe iminyaka engamashumi amathathu, futhi isabelo sayo semakethe siyakhuphuka okwakamuva ngenxa yezindleko zayo eziphansi kanye nokungcoliswa okuphansi kwemvelo.
inayiloni roller esitokweni
Ama-roller enayiloni nawo asetshenziswa kabanzi. Ama-pulleys asetshenziswa noma kuphi lapho kunezintambo zensimbi. Ama-pulleys ajwayelekile enziwe nge-cast iron, insimbi yensimbi nezinye izinto. Ama-pulleys ensimbi aguga ikhebula, athinta kakhulu impilo yekhebula elibizayo futhi asongela ukusetshenziswa okuphephile kwemishini. Ukusetshenziswa kwensimbi yenayiloni yokwenza ama-pulleys ngqo ukubhekana nezingqinamba ezinkulu zamapulle yensimbi futhi kuthuthukiswe futhi kwasetshenziswa
Ukuhlanganiswa kwenayiloni kusetshenziselwa ukuxhuma imiphini emibili (shaft yokushayela kanye ne-shaft eqhutshwa) ngezindlela ezahlukahlukene ukuze zikwazi ukujikeleza ndawonye ukudlulisa izingxenye zemishini ezimile. Ekudluliseni amandla ngesivinini esikhulu nangesisindo esikhulu, ezinye izixhumi zomsebenzi nazo zinomsebenzi wokubhafa, wokudambisa amanzi nokwenza ngcono ukusebenza okunamandla kokushefa.
Inayida isilayida isetshenziswa kabanzi kuloli, futhi ingakhiqizwa ngosayizi abahlukahlukene, ubujamo, ukubamba izidingo ezihlukile zeloli.
Ama-washer enayiloni anezinto ezinhle kakhulu zokuhlukanisa, okungezona kazibuthe, ukwahlukanisa ukushisa, isisindo esincane, ama-washer epulasitiki wezinto ngazinye futhi anokumelana nokushisa okuphezulu, amandla aphezulu, ukumelana nokugqwala, eminye imikhiqizo inomsebenzi wokulwa nokuwa, osetshenziswa kakhulu emikhakheni eyahlukahlukene yezimboni.
inayiloni Pin ngokuqina okuphezulu
Indawo yokukhiqiza iphini lenayiloni is bushing. Izikhonkwane zenayiloni zisetshenziselwa ukucubungula isikhunta esiyinhlanganisela. Uma kuqhathaniswa nezikhonkwane zensimbi, izikhonkwane zenayiloni zonakaliswa kalula, okuqinisekisa ukuthi isikhunta esiyinkimbinkimbi asilimazi. Ngakho-ke, kunenkolelo yokuthi ukusetshenziswa kwalezi zikhonkwane zenayiloni kuzonciphisa kakhulu izinga lokulahla kwesikhunta.